University of Bayreuth - Fianarana ambony any Alemaina
Aza adino ny ifanakalozy hevitra University of Bayreuth
Misoratra anarana ao amin'ny University of Bayreuth
Tongasoa eto amin'ny University of Bayreuth. Mieritreritra sy miasa iraisam-pirenena dia mitaky zavatra mihoatra noho ny hoe iray amin'ireo oniversite tsara tarehy indrindra any Bavaria sy ny fibodoana toerana ambony ao amin'ny firenena ny fampianarana sy ny fikarohana filaharana. Izany no antony, efa nametraka tanjona fampandrosoana ho an'ny taona 2020 mba bebe kokoa hanasa ny Anjerimanontolon'i Bayreuth mombamomba azy ny tsy manam-paharoa sy ny fifaninanana sisiny:
Noho ny nahay ny fitsipika samy hafa, ary mifantoka faritra stratejika voafidy, ny Oniversiten'i Bayreuth dia fantatra iraisam-pirenena noho ny fikarohana vola sy manome fianarana tsara tontolo iainana.
Ny University of Bayreuth dia iray amin'ireo toerana tany Alemaina mpitarika eo amin'ny fianarana ny tontolo iainana sy ny haavon'ny ny mpianatra.
Ny Oniversiten'i Bayreuth dia mamoha angatra-salantsalany toeram-pianarana amin'ny oniversite izay nanolorana azy ho amin'ny ambony indrindra fianarana ambony sy ny fitsipika, izay efa nanao ezaka mba hametraka ny tenany ankoatra ny anjerimanontolo lehibe kokoa.
Amin'ny maha iray amin'ireo tanora indrindra Alemaina ny anjerimanontolo, isika, dia afaka miasa amin'ny manavakavaka, tena matoky ny fahalalahana akademika toe-tsaina, fandrosoana ara-tsiansa, ary ny ara-tsosialy andraikitra. Mifanaraka amin'ny fahitana, ny laharam-pahamehana ambony ireo fanaraha-maso tsirairay, fianarana ambony foana fitsipika, ary ny famoronana fandaharan'asa ny fianarana izay mandray fikarohana amin'izao fotoana izao tafiditra ao. Ny interdisciplinary fifantohana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny zava-baovao maro ny fitsipika no manan-danja ny lafiny fikarohana Bayreuth kolontsaina.
In jery todika ny, dia izao mazava tsara ny fomba manan-tsaina, dia niverina tao 1975 mba hanorina ny oniversite mifototra amin'ny foto-kevitra mafy natambatra interdisciplinary faritra amin'ny fikarohana sy ny fampianarana. Ny fanontaniana atrehin'ny fiaraha-monina ny fanatontoloana dia lasa bebe kokoa sarotra. Ny valiny tsara dia afaka ho hita ihany amin'ny alalan'ny akaiky, hazo fijaliana-pifehezana fiaraha-miasa - iray amin'ireo lehibe indrindra University fananan'ny. Ny University of Bayreuth dia miavaka amin'ny fahalalahana akademika, fandrosoana ara-tsiansa, ary azo ampiharina dehibe, rehetra izay azon'ny ao anatin'ny ara-tsosialy sy ara-kolontsaina andraikitra.
Tongasoa eto amin'ny iray-ny-a-tsara fanahy toeram-pianarana.
Izany dia sady ny fon'ny amin'ny University sy loharanom-fitaomam-panahy. Izany no toerana natao namana, fiaraha-miasa dia nanomboka, ary ny hevitra dia nanan-anaka, antoka fa ny oniversite mijanona ho Fanilo ny fanavaozana. Fifanakalozana ara-tsiansa faran'izay mahasoa avy amin'ny maro samihafa ny fitsipika ny fifandraisana toeram-pianarana mitondra miara-. Izany angamba no antony mahatonga ny Anjerimanontolon'i Bayreuth no afaka mankalaza maro loka sy voninahitra noho ny manam-pahaizana zava-bita.
Izao tontolo izao dia ny tanàna
... Ary Bayreuth dia afovoan'ny. Izay misy mponina manodidina 73,000, Bayreuth dia tsy tena lehibe, fa izany no iray amin'ireo zavatra izay mahatonga izany aza manintona. Ny olona mihazakazaka ho iray hafa. Mety ho ny tanàna izao tontolo izao-malaza noho ny tantara an-kira fanao isan-taona fety, fa manome ihany koa ireo mpianatra sy mpikaroka ny harena ara-kolotsaina sy ara-javakanto manintona, Wagner kely. Ho avy Tsy mahagaga fa ny antoko ny tanàna sy ny Pub sary dia mafy eo an-tanan 'ny mpianatra. Fa ianareo kosa hatao haingana gaga ianao dia afaka mahita ny lalana manodidina rehefa mahita ny fetra eo amin'ny toeram-pianarana sy ny tanàna foibe lasa kely sy tsy hita maso. Mety ho satria fotsiny rehefa avy ihany no fotoana fohy misy mahazatra tarehy amin'ny isan-joron'ny.
Location dia ny zava-drehetra.
Toerana mahafinaritra avaratra Bavaria, tsara ao amin'ny Bayreuth ny baravarana, lehibe ho an'ny fanatanjahan-tena ny asa: bisikileta, tongotra lavitra, -tendrombohitra fiakarana, canoeing, Rafting, ary tia manao ski ambony no fomba tsara rehetra mba hanatsarana ny fialam-boly fotoana. Na izany aza, raha mitranga naniry mafy ny mihevitra ny tanàna lehibe kokoa dieny izao, ary avy eo, Nuremburg ihany ny adiny iray-mitaingina fiaran-dalamby izy, ary Munich ihany 2 ½ ora lasa. Afaka tonga Berlin in 4 ora ny fiara, Leipzig in antsasaky izany fotoana izany. Ary aza adino: na dia nanana ny fon'i Eoropa Prague koa midika ihany telo-ora fiara izy.
Matematika, Physics sy Computer Science
Haiaina, Simia sy ny Tany Siansa
lalàna, Business sy ny Toekarena
Fiteny sy ny literatiora
Ianao ve mila ifanakalozy hevitra University of Bayreuth ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
University of Bayreuth ao amin'ny Map
Photos: University of Bayreuth ofisialy Facebook
University of Bayreuth Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Oniversiten'i Bayreuth.
Technical Oniversiten'i Munich Munich